के प्लास्टिकको प्रयाेगले मानब स्वस्थ्यमा असर गर्छ ? – Bishwo Ghatana – World News
के प्लास्टिकको प्रयाेगले मानब स्वस्थ्यमा असर गर्छ ?
खानेकुरा प्याक गर्न प्रयोग गरिने प्लास्टिकले स्वास्थ्यमा हानि गर्ने बताइँदै आएको छ। केही समयअघि प्लास्टिकको बोतललाई घाममा राख्दा रसायन निस्कने र पानीमा घुलेर शरीरमा क्यान्सर हुने दाबी गरिएको एउटा इमेल भाइरल भयो। सो इमेलमा बारम्बार एक विश्वविद्यालयको अनुसन्धानलाई उद्धृत गरिएको थियो। तर, त्यो इमेल झुटाे रहेको पुष्टि भइसकेको छ।
‘बिस्फेनल ए’का कारण थोरै चिन्ता
प्लास्टिकमा पाइने बिस्फेनल ए (बिपिए) नामक रसायनलाई लिएर केही वैज्ञानिकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पोलिकार्बोनेट कन्टेनर, स्ट्याम्पलगायतमा प्रयोग हुने कागजमा समेत बिपिए रसायन हुन्छ। यसले मानव शरीरमा हानि गर्ने बताइँदै आइएको छ। यद्यपि, यसले स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रमाणित भइसकेको भने छैन।
शरीरमा बिपिएको अधिक मात्राले विशेषगरी साना या गर्भवती मुसालाई हानि गर्न सक्छ। तर, मानव शरीरमा बिपिएजस्ता रसायनको पाचन निकै फरक ढंगले हुन्छ। हाम्रो शरीरले दैनिक ग्रहण गर्न सक्ने बिपिएको मात्राले असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको पनि अहिलेसम्म कुनै यकिन प्रमाण छैन।
प्याकेजिङको कार्यमा बिपिएको प्रयोग वर्षौँदेखि हुँदै आएको छ। विकसित देशका अधिकांश वयस्कको पिसाबमा बिपिए भेटिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्लास्टिक प्याकेजिङमा बिपिएको उपयोग नगरे यसको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। अधिकांश प्लास्टिकमा एउटा नम्बर लेखिएको हुन्छ, जसबाट त्यसमा बिपिए छ या छैन भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ।
बिपिए कसरी पत्ता लगाउने ?
यो नम्बर त्रिभुजाकार रिसाइक्लिङ (पुनः प्रयोग) चिह्नभित्र लेखिएको हुन्छ। १, २, ४ वा ५ को अर्थ प्लास्टिकमा बिपिए रसायन छैन भन्ने हुन्छ। ३ वा ७ को अर्थ प्लास्टिकमा बिपिए छ भन्ने हुन्छ। यसमा लेखिएको ६ को अर्थ प्लास्टिक पोलिस्टाइनिनबाट बनेको भन्ने हुन्छ।
युरोपेली संघमा बालबालिकाले प्रयोग गर्ने बोतल र खेलौनाका लागि प्रयोग हुने प्लास्टिक बिपिएमुक्त हुन्छ। यद्यपि, खाना प्याक गर्ने प्लास्टिकमा बिपिए पाइन्छ। त्यसैले आमजीवनमा प्लास्टिकमा पाइने यो रसायनबाट बच्न लगभग असम्भव छ।
हराउँदै गइरहेको छ पृथ्वीको चमक
ब्लू ओरिजिनद्वारा नासा बिरूद्ध अदालतमा मुद्दा
ऊँटभन्दा पनि लामो समयसम्म पानी नखाइक बाँच्न सक्ने जीव – मुसा3views
फाँसीमा झुण्डिनुअघि रफीको गीत3views